छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईको मृत्यु २१ घाइते – Sadarline
२१ आश्विन २०७३, शुक्रबार १२:१५
२१ असोज, नेपालगन्ज : बाँके र सल्यानमा भएको सडक दुर्घटनामा परेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ । भने २१ जना घाइते भएका छन ।
सल्यानमा जीप दुर्घटनामा परी एक जनाको ज्यान गएको छ । शुक्रवार बिहान ५ः३० बजे जिल्लाको शारदा नगरपालिका–६ मदमकाँडा नजिकै लु १ ज २९३४ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो । जीप दुर्घटना हुदाँ जीप मालिक तथा चालक शारदा नगरपालिका–१ का ३२ वर्षिय घनश्याम थापाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ ।
जीप सहचालक शारदा नगरपालिका–१ निबासी यामबहादुर भण्डारी सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सल्यान रुकुम यातायात ब्यबसायि समितीको भाडाको जीप बिहान बुकिङको यात्रु ल्याउन जाने क्रममा दुर्घटना भएको हो । बाटोमा साँघुरो भएकाले जीप ब्याग गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरी अनुमान गरेको छ । प्रत्यक्ष दर्शिका अनुसार बटो उकालो भएका कारण जीप ब्याक भयो जीपका सहचालकले ओट राखेको भएपनि त्यसलाई नाघेर जीप पछाडी तिर आयो चालक आत्तिएर हाम फालेको ठाउँतिर पल्टिएपछि उनलाई जीपले च्यापेर ज्यान गएको हो ।
उता तरकारि बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा सल्यानको धनवाङ कपुरकोटमा तरकारि बोकेको मिनि ट्रक शुक्रवार विहान ६ बजे तीर दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते भएका छन् । धनवाङ २ मुलपानी नजिक आगरखोला भन्ने स्थानमा शुक्रबार लाग्ने कपुरकोटको तरकारि बजारमा रिम ३ खारखोला बाट तरकारी लिएर आउँदै गरेको रा १ ख ११५१ नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा घाइते हुने १९ जना रिम, त्रिवेणि र धनवाङका किसान रहेका छन् भने एक जना चालक तुलसीपुर नरपालीका–९ का अमर बुढाथोकी र सहचालक शुक बहादुर चौधरि रहेका छन् । घाइतेहरुको कपुरकोट स्थीत पोलिक्लिनिक र दाङ तुलसिपुरमा उपचार भइरहेको कपुरकोट प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच बाँकेकोे कोहलपुर–कसुम सडक खण्डमा बिहीबार साँझ भएको दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार बाँकेको अगैयादेखि १ किलोमिटर पूर्व काठमाण्डौबाट धनगढी जाँदै गरेको ना ५ ख ५२३५नं को बस र कोहलपुरबाट दाङ्गतर्फ जाँदै गरेको रा २ प ७७२६ नं.को मोटरसाईकल एक आपसमा ठोकिदा सल्यान काँकडाघारी–३ का ३७ वर्षिय खिमबहादुर घर्तीको मृत्यु भएको हो ।
ईलाका प्रहरी ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका ईञ्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार सो दर्घटनामा परी गम्भीर घाइते रहेका घर्तीको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको हो ।
डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्राण्डी अस्पताल डाक्टरसाब, म त रक्सी खान्न, कहिलेकांही वियर मात्रै हो । डाक्टरसाब, दिनहुं अलिअलि रक्सी त मुटुलाई राम्रो भन्छन् नि होइन ? डाक्टरसाब, म त पिउने भनेको विदेशी मात्रै हो, नेपाली, लोकल भनेको त छुदा पनि छुन्न । मदिरा भन्नाले अल्कोहोलयुक्त पेय पदार्थलाई […]
१८ माघ २०७७, आईतवार १७:०६